Wave money လေးနဲ့ စိတ်ကိုချမ်းသာလို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » Wave money လေးနဲ့ စိတ်ကိုချမ်းသာလို့
Wave money လေးနဲ့ စိတ်ကိုချမ်းသာလို့
Posted by Shar Thet Man on Apr 24, 2020 in Local Guides, Photography, Society & Lifestyle |0comments
ဒီတစ်ခါကတော့ ခရီးသွား review ရေးတာမဟုတ်ဘဲ ငွေလွှဲရင်လည်းအဆင်ပြေ၊ ငွေထုတ်ရလည်း လွယ်ကူ၊ အကယ်လို့များ ကိုယ်က ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို ငွေမှားလွှဲတဲ့အခါ ဟိုဘက်ကမှားလွှဲခံရတဲ့နံပါတ်က အဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆို စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ..ရက်ပိုင်းလေး စောင့်ရုံနဲ့ ပြန်လည်ရရှိနိုင်တဲ့ Wave Money အကြောင်းလေးကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
#Wave money နဲ့ငွေလွှဲမယ်ဆို
ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့မဆို ..ငွေလွှဲလို့ရပါတယ်။ wave money ဆိုင်သွားပြီး ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်
တဲ့ password6လုံးပေးပြီးလွှဲလို့ရပါတယ်။
#Wave money နဲ့ငွေထုတ်မယ်ဆို
လွှဲပေးလိုက်တဲ့သူဆီက လုပ်ငန်းစဉ်နံပါတ်ကို တောင်း၊ (တခါတလေ ဖုန်းမက်ဆေ့ ထဲရောက် ပါတယ်) password သေချာတောင်းပြီး နီးစပ်ရာ wave money ဆိုင်မှာ ထုတ်ပါ။
မွန်လေးကတော့ wave money နဲ့လွှဲဖြစ်တယ်။ နယ်ကလူတွေနဲ့လည်း ပက်သက်ပြီးအလုပ်
လုပ်နေတာဆိုတော့ ဘဏ်နဲ့့အဆင်ပြေရင်ပြေ မပြေရင် wave money နဲ့လွှဲခိုင်းတာပဲ။ ဘာလို့ ဆို ဘဏ်ကကြာတယ်။ အခုလွှဲရင် အခုချက်ချင်းမရဘူး။ wave money ကျ အခုလွှဲ၊
အခုချက်ချင်းထုတ်လို့ရတယ်။ အဲ့မှာ ကိုယ်မအားတဲ့အခါ၊ ထုတ်ဖို့မေ့တာမျိုးမွန်လေးကမဖြစ်ရ
အောင် wave money account လုပ်ထားလိုက်တယ်။
#Wave money account လုပ်နည်း
Android ဆို play store ထဲမှာ wave money icon လေးကိုဒေါင်းပါ။ IOS ဆို app ထဲမှာ wave money icon လေးကိုဒေါင်းပါ။ ဘယ်ဖုန်းမဆို ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
အကောင့်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင် ကိုယ့်ကို ငွေလွှဲပေးမယ့်သူကို အကောင့်ထဲထည့်ခိုင်းရင် နောက်ပိုင်း ကိုယ်ထုတ်ချင်တဲ့အချိန်ကျမှ ထုတ်လို့ရပါတယ်။ ထုတ်ဖို့မေ့တာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့။ တစ်ခုရှိတယ်။ ဒီနေရာမှာ ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ထုတ်ခရှိတယ်ပေါ့နော်။
ဒီတော့ မွန်လေးက ထုတ်ခမပေးရအောင် လုပ်လို့ရတဲ့နည်းပြောပေးပါမယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Yoma Bank နဲ့ချိတ်ဆက်တာပါပဲ။ Yoma Bank မှာ အကောင့်ဖွင့်၊ mobile banking လေးလုပ်၊ တစ်ပတ်လောက်စောင့်ရင် wave နဲ့ ချိတ်ထားပြီး …နောက် wave ထဲက ပိုက်ဆံထုတ်ချင်ရင် Yoma Bank က ATM card လေးနဲ့ ATM စက်ထဲမှာ သွားထုတ်ရုံပဲပေါ့။ မပိုင်လား?
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ..မွန်လေးလေ..ဟိုးတလောက..ငွေလွှဲဖို့လိုလို့..အလောတကြီး wave account ကနေ လွှဲလိုက်တာ နောက်ကဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးမှားသွားတယ်လေ..အဲဒါနဲ့ မှားသွားတဲ့ဖုန်း နံံပါတ်ကိုဆက်သွယ်တာလုံး၀ကိုမရဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ wave money call center ကိုခေါ်ရတော့ တာပေါ့။ Call center ဖုန်း – 09 790 009000. သူတို့က covid ဖြစ်နေ တာကြောင့် ၁၅ရက် လောက်စောင့်ခိုင်းတယ်။ သက်ဆိုင်တဲ့သူက ပြန်ဖုန်းဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီး တကယ်တမ်းပြန်ဆက် ပေးတဲ့အခါ သူတို့လည်းဆက်သွယ်လို့မရဘူးတဲ့..ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့..
အမမှတ်ပုံတင်လေးကို သူပြောတဲ့ viber နံပါတ်ကို ပို့ပေးပါတဲ့..ဆိုတော့ ကိုယ်လည်းပေး လိုက် တာ…၂ရက်ပဲထပ်ကြာ တယ်..ကိုယ်လွှဲလိုက်တဲ့ငွေကို အကောင့်ထဲပြန်ထည့်ပေးတာ တွေ့ လိုက် ရတယ်။ ကိုယ်ဖြင့်အရမ်း ပျော်သွားတာပဲ။ တကယ်ကို responsiblity အပြည့်ရှိတဲ့ ငွေလွှဲ agent လေးပါ။ နောက်ထပ် လည်း ငွေလွှဲလက်ခံတာတွေ၊ ငွေလွှဲခိုင်းတာတွေလည်း ရှိဦးမှာမို့ wave money ကိုပဲဆက်သုံး ဖြစ်ဦးမှာပါလို့။ ကူညီပေးခဲ့တာအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်လို့။